अधिकांश विकास बैंकले यो वर्ष वोनस सेयर दिने, चुक्ता पुँजी अझै बढाउँदै « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट अधिकांश विकास बैंकले वोनस लाभांश दिने भएका छन् । अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका ७ वटा विकास बैंकमध्ये ६ वटाले वोनस सेयर दिने प्रस्ताव राष्ट बैंकमा पेश गरेका छन् ।
अहिलेसम्म लाभांश प्रस्ताव घोषणा गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी कावेली विकास बैंकले ३५ प्रतिशत वोनस सेयर दिने भएको हो । उसले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश नदिएर वोनस सेयर मात्र दिँदै छ । दोस्रो धेरै वोनस सेयर दिनेमा साइन रेसुड. डेभलपमेन्ट बैंक छ । उसले १८ प्तिशत वोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो धेरै वोनस सेयरको घोषण गरिमा विकास बैंकले गरेको छ । यस बैंकले १० प्रतिशत वोनस सेयर र ३.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिँदैछ ।
यसैगरी महालक्ष्मी विकास बैंकले ८ प्रतिशत वोनस र ७ प्रतिशत वोनस सेयर दिँदै छ । कन्काइ विकास बैंकले ३ प्रतिशत वोनस र ६.५० प्रतिशत नगद लाभांश दिँदै छ । हाम्रो विकास बैंकले २.४० प्रतिशत वोनस सेयर र ७.९२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । नगद लाभांश मात्र दिने विकास बैंक ज्योति मात्र परेको छ । ज्योति विकास बैंकले ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने नीति ल्याएपछि विकास बैंकले नगद भन्दा वोनस सेयर वितरण गरिरहेका छन् । राष्ट बैंकले दुई वर्ष अघि चारदेखि ६ गुनासम्म पुँजी बढाउने नीति ल्याएको थियो । कुनै बेला ८५ भन्दा बढी विकास बैंक सञ्चालनमा थिए । अहिले त्यो संख्या घटेर ३३ वटामा सिमित भएका छन् ।